AKHRISO: Khasaaraha £300 Milyan Ee Gini Ee Barcelona Ay Sannadka Kaliya Gashay & 7dii Saxeex Ee Xilli-ciyaareedkii 2017-18 Oo Hal Ciyaartoy Ka Joogo - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaAKHRISO: Khasaaraha £300 Milyan Ee Gini Ee Barcelona Ay Sannadka Kaliya Gashay & 7dii Saxeex Ee Xilli-ciyaareedkii 2017-18 Oo Hal Ciyaartoy Ka Joogo
AKHRISO: Khasaaraha £300 Milyan Ee Gini Ee Barcelona Ay Sannadka Kaliya Gashay & 7dii Saxeex Ee Xilli-ciyaareedkii 2017-18 Oo Hal Ciyaartoy Ka Joogo
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa khasare weyn gashay hal sano gudihii, waxaanay bixisay in ka badan £300 milyan oo Gini oo ay ciyaartooyo ay ku khasaartay ay ka bixisay.
Kaddib markii uu Philippe Coutinho, si rasmi ah ugu wareegay Aston Villa oo Barcelona kaga iibsatay £17 milyan oo Gini oo kaliya, waxa aynu halkan ku milicsanaynaa lacagihii badnaa ee ay kooxda reer Spain bixisay xilli ciyaareedkii 2017-18.
January 2018 ayay Barcelona kasoo bixisay Coutinho lacag gaadhaysa £142 milyan oo Gini oo ay kaga soo iibsatay Liverpool, balse afar sannadood kaddib ayay ku iibisay kaliya £17 milyan oo kaliya.
Kalidii ma ahayn, waxaase jiray ciyaartooyo kale oo lix ahaa oo ay Barcelona soo iibsatay sannadkaas, waxaanay dhamaantood ku fashilmeen in ay saldhigaan Camp Nou inkasta oo ay lacago badan kasoo bixisay, marka laga reebo hal ciyaartoy oo wali kusii hadhsan kooxda, kaas oo isaguna iskaga tegaya xagaagan.
Kooxda reer Brazil ee Fluminense ayay Barcelona kala soo wareegtay, iyadoo qaab amaah ah uu ku yimid Camp Nou ka hor intii aanay heshiiskiisa u beddelin mid rasmi ah. Waxay amaah ugu dirtay Nice, waxaanu usii dhaafay Sassuolo sannadkii 2018. Xataa hal ciyaar oo kaliya uma safanin Barcelona, waxaana uu hadda ku sugan Shakhtar Donetsk oo heshiis amaah iib wadata uu kula joogo.
Waxa uu ka mid ahaa xiddigihii ay Barcelona rumaysnayd inuu wax badan kusoo kordhinayo. Kulliyadda ayaa uu kasoo baxay balse waxa loo diray amaah markii uu bandhig heersare ah ka sameeyey Everton oo uu amaah ku tegay.
Xiddigan reer Spain ayaa fursad yar uu siiyey tababare Valverde, isaga oo dhaliyey laba gool oo kaliya. Kaddib imaatinkii Coutinho, waxa uu Deulofeu amaah ugu tegay Watford oo markii dambena si rasmi ah ula wareegtay.
Sannadkii 2017 ayay Barcelona saxeexiisa ku garaacday kooxo badan, waxaanay kaga guuleysatay Jose Mourinho oo waqtigaas joogay Manchester United. £26 milyan oo Gini ayay kusoo iibsadeen, xilli ciyaareedkiisii koowaadna waxa uu saftay 30 kulan, balse taasi waxay ugu filnaan weyday in lagu daro xulka qaranka Portugal oo uu tababare Fernando Santos u qaaay Cedric Soares iyo Ricardo Pereira.
Kaddib markii uu Alphonso Davies ku ceebeeyey kulankii ay Bayern Munich 8-2 ku garacday Barcelona sannadkii 2020, Barcelona ayaa u dirtay Wolves oo uu si rasmi ah ugu wareegay.
Ruug-caddaaga reer Brazil ayay layaab ahayd markii isaga oo kusoo faashilmay Tottenham oo tegay waddanka China uu dib ugu soo laabtay Yurub oo uu waliba ku biiray Barcelona. Xilli ciyaareedkiisii koowaad waxa uu 34 kulan oo uu u saftay uu u dhaliyey sagaal gool, isaga oo noqday ciyaartoyga saddexaad ee ugu goolasha badnaa Barcelona.
Amaah ayuu dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee reer China ee Guangzhou Evergrande kaddib Koobkii adduunka, waxyar kaddibna rasmi ayaa laga dhigay heshiiskiisa. Hadda waxa uu ku sugan yahay kooxda reer Saudi Arabia ee Al-Ahli.
Xiddiga reer France ayay Barcelona kasoo bixisay £97 milyan oo Gini, kaddib markii ay PSG kala wareegtay Neymar. 24 jirkan ayay dishoodeen dhaawacyo, waxaana uu illaa waqtigaas u saftay 100 ciyaarood oo LaLiga ah oo kaliya. Waxa uu hadda diyaar u yahay inuu si bilaash ah kaga tago markii uu diiday inuu qandaraaska u cusboonaysiiyo.
January 2018 ayay Barcelona kasoo bixisay £142 milyan oo Gini, waxaanay ka filaysay inuu sidii Liverpool oo kale wacdaro u dhigi doono. Xilli ciyaareedkiisii koowaad ee uu kala-badhka ugu yimid wuu fiicnaa, laakiin sannadkii labaad ayuu hoos u dhacay.
Waxa amaah loogu diray Bayern Munich oo uu sannadkii 2020 kula guuleystay Champions League, isaga oo waliba ciyaartii 8-2 ay Bayern Munich ku karbaashtay Barcelona goolal dhaliyey. Kaddib Aston Villa ayaa amaah loogu diray horraantii xilli-ciyaareedkan, hadda ayaanay kooxda reer England si rasmi ah ula wareetay.
Coutinho ma ahayn ciyaartoyga kaliya ee January 2018 ay Barcelona la saxeexatay, waxaase wehelinayay Yerry Mina oo ay Barcelona £11 milyan oo Gini kaga soo iibsatay kooxda reer Brazil ee Palmeiras.
Difaaca reer Colombia ayaa lix ciyaarood oo kaliya u dheelay Barcelona, waxaana amaah loogu diray Everton oo uu isku muujiyey. Barcelona ayaa ku iibisay laban-laab lacagtii ay markii hore kusoo iibsatay.